किन लिएका थिए भगवान विष्णुले कृष्णा अवतार ? यस्तो छ कारण – Jagaran Nepal
किन लिएका थिए भगवान विष्णुले कृष्णा अवतार ? यस्तो छ कारण
कृष्णलाई भगवान विष्णुका अवतार मानिन्छ र कृष्णको जन्मोत्सव नेपाल र भारतमा धुमधामसँग मनाउने चलन छ । किन लिएका थिए भगवान विष्णुले कृष्णा अवतार ? धर्म ग्रन्थका अनुसार कृष्णको जन्मको कारण यस्तो छःद्वापर युगमा जव पृथ्वीमा मानवरुपी रा,क्षसको अ,त्याचार बढ्न थाल्यो तव पृथ्वी दुखी भएर भगवान विष्णुको शरणमा पुगिन् ।भगवान विष्णुले पृथ्वीको दुःख देखेर तत्काल आफूले कृष्ण अवतार लिने र दु,ष्टहरुको ना,श गर्ने बचन दिनु भयो । द्वापर युगको अन्त्यमा हाल भारतमा पर्ने मथुरा भन्ने राज्यमा उग्रसेन नामका राजा राज्य गर्थे । उग्रसेनका पुत्र थिए कंस । कंसले आफ्ना पितालाई बन्दी बनाएर राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
कंसकी बहिनी देवकीको विवाह यादव कुलका बासुदेवसँग हुने तय भएको थियो । तर जव कंस देवकीलाई विदा गर्न जाँदै थियो त्यति नै बेला आकाशवाणी भयो । आकाशवाणीमा देवकीको आठौं सन्तानले कंसको बध गर्ने भन्ने सुनेपछी कंस जंगियो । मन मनै डराएको कंसले देवकी र बासुदेवलाई पनि जेल हाल्यो । देवकीले जन्माएका सबै सन्तान कंसले मार्न थाल्यो ।
देवकीले आठौं सन्तानकोरुपमा भगवान श्री कृष्णलाई जन्म दिइन् । तर भगवानको मायावी जादुले यसको जानकारी कसैलाई पनि भएन । बासुदेवले कृष्णलाई गोकुलका नन्दवावा र यसोधाको काखमा छोडेर उनकी छोरी आफ्नो साथमा लिएर कारागारमा फर्किए ।कंसले जव देवकीको सन्तान ठानेर ती कन्याको ह,त्या गर्न खोज्यो त्यति नै बेला ती कन्या उडेर आकाशमा गइन् र कंसलाई मार्ने बालक गोकुलमा हुर्किरहेको चेतावनी दिइन् ।
कृष्णले बाल्यकाल देखि नै एक पछि अर्को गर्दै कंसका सहयोग रा,क्षसहरुको ब,ध गर्दै गए । अन्त्यमा कंसको समेत ब,ध गरेर उग्रसेनलाई सिंसानमा राखे ।भगवान कृष्णले महाभारतको यु,द्धमा पाण्डवको साथ दिए र अधर्मको नाश गरी युथिष्ठिरलाई सिंहासनमा बसाए ।यसरी संसारको दुःख ह,रण गरेपछि कृष्ण लिला समाप्त भयो ।भगवान श्री कृष्णले १६ हजार गोपिनीसँग १६ हजाररुप धारण गरेर गरेको लिला अदभुत मानिन्छ । श्रीकृष्णलाई महापुरुष र अरुको मनको कुरा थाहा पाउने पुरुष अन्तरयामी समेत भनिन्थ्यो ।
विवाह गरेको दुई महिनामै १६ वर्षीया निमाको मृत्यु भएपछि….
कन्चनको उपचारको लागि काठमाडौं बाट चितवन पुगे अर्जुन हेर्नुस्.. (पुरा भिडियो सहित )